Blood Father - YTV
Home » Programs » International Movie » Blood Father
Daily Show, International Movie, Programs September 5, 2020 12:20 am
?‍? ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ သားသမီးတွေအပေါ်မှာ ထားတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ ဘယ်အရာနဲ့မှ ယှဉ်နှိုင်းလို့မရပါဘူးတဲ့………
? ဒီစကားကို သက်သေပြထားတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးဂိုဏ်းနဲ့ ဆက်သွယ်မိတဲ့ သမီးလေးကို အမှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့ ကာကွယ်ဖို့ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားတဲ့ အက်ရှင်ဒရာမာဇာတ်ကားကြီး “Blood Father” ကို YTV Channel ရဲ့ ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက် ပြသပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်………
? သူမတို့နှစ်ယောက် ဒီအန္တရာယ်တွေကြားကနေ လွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာကိုတော့ YTV Channel ကနေပြသမယ့် အက်ရှင်ဒရာမာဇာတ်ကားကြီး “Blood Father” ကို စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရင်း ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ သားသမီးအပေါ်ထားတဲ့ ကြီးမားတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ခံစားကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော် ပရိသတ်ကြီး………
? ပြသမည့်ရက် : ၅ – ၉ – ၂၀၂၀ (စနေ)
⏰ ပြသမည့်အချိန် : ညနေ (၅) နာရီ (၁၅) မိနစ်
? ပြန်လည် ပြသမည့်ရက် : ၆ – ၉ – ၂၀၂၀ (တနင်္ဂနွေ)